Izindaba - Iyini ivalvu yokukhiya ye-Quick Cleaning Rotary Air ?
Ngokuphela cishe iminyaka engama-20. Kwebhizinisi kukokubili imakethe yethu yasekhaya kanye nezimakethe zaphesheya, bona yizwi’s Ibhisikidi nenkampani yamabhisikidi ehamba phambili ngokushesha okukhuluiy. Ngemikhiqizo engaphezu kwe-15 ethengiswayo emakethe, iNkampani iyingxenye yempilo yansuku zonke yezigidi zabathengi kuyo yonke indawo.Umhlaba. Ngiyaziqhenya ngokuhlotshaniswa nomkhiqizo omkhulu ZILI lokho kudale umthelela omuhle emphakathini.
E-Bakery Industries, inhlanzeko ibalulekile futhi idinga ukuhlanzwa njalo kwezinto ezisetshenziswayo. Inselele yekhasimende lethu ibingehlukile. Ukunqanyulwa kaningi kwe-valve ejikelezayo ukuze ikhishwe bese ihlanzwa kwakuyinselele. Isikhathi sokunakekela sasivame ukuba amahora angu-1.5. kuze 2h. Ukusebenzelana kaningi kanye nokunqanyulwa kwevalvu ejikelezayo kubangele ukuphila okufushane kwezigxivizo ze-shaft, ngaleyo ndlela, kudingeka kushintshwe njalo ivalvu ejikelezayo ngokwayo.
I-Quick Clean Valve enomklamo wenhlanzeko/yenhlanzeko yayiyisixazululo esisinikeze ngezinto zokwakha ze-SS 304 ezizofakwa ngaphansi kwe-hopper.
Imikhiqizo ye-Bakery Industries ikakhulukazi iyimpushana eyomile noma i-granular. Umsebenzi oyinhloko wevalvu ye-rotary airlock ukugcina isimo esihle sokuvala umoya, ngaleyo ndlela, ukuhlukanisa umfula ongezansi naphezulu ukudlulisa umfutho/i-vacuum.
Ukuhlanza ngokushesha I-Rotary Valve yakhelwe izinhlelo zokusebenza ezizwelayo ekonakaleni noma inqubo edinga ukuhlanzwa njalo. Ukuklama kwayo kunikeza ukufinyelela okulula ku-rotor nezindawo zangaphakathi zokuhlanza ngokushesha ngaphandle kwesidingo sokukhipha i-valve ejikelezayo ohlelweni.
Ama-valve ahlanzekile asheshayo asetshenziselwa ukunciphisa isikhathi sokuphumula sokuhlanza i-valve, okuvumela ukukhishwa kwe-rotor ngaphandle kokukhipha indlala yokupakisha. I-disassembly kanye nokuhlanganisa kabusha kungenziwa ngaphandle kwemfuneko yanoma yiliphi ithuluzi. Ngaphezu kwalokho, ukuhlelwa kokuhlanza ku-valve kuthuthukisa impilo yezimpawu ze-shaft.
i-valve ejikelezayo, i-valve ye-airlock, I-3-Way Diverter Valve, I-Electronic Control Valve, i-rotary feeder, I-3 Way Ball Valve,